တရားတော်များ – Manawmaya
❖ မြတ်စွာဘုရားက . . . လောကမှာတဲ့ …. ❖ တစ်ချို့လူတွေက . . . ကိုယ့်အပေါ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်က ကောင်းလို့
By မနောမယ / June 25, 2019
ဘေးရန်ကင်းကွာ စီးပွားဖြာသည့် ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ ဂါထာပါဠိအနက်
၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊ အရဟံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ မနောမယ
By မနောမယ / May 11, 2019
မေတ္တာဘာဝနာပွားများနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကအားဖြင့် နည်းနှစ်နည်းရှိပါသည်။ ပဋိသမ္ဘိ ဒါမဂ်ပါဠိတော်လာ ဒိသာဖရဏမေတ္တာပွားနည်း (အရပ်ဆယ်မျက်နှာဖြစ်၍ မေတ္တာပွားနည်း)နှင့် မနောမယ
By မနောမယ / March 5, 2019
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ လက်ျာရံနှင့် လက်ဝဲရံများ
ကျွန်တော်သည် မနောမယဂျာနယ် အမှတ် (၈၉၇)တွင် လာဘ်များသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရသော အရှင်သီဝလိမထေရ်အကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ရေးသားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါစာပိုဒ် ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ မနောမယ
By မနောမယ / January 18, 2019
မေတ္တာကိုနှလုံးသွင်းခြင်းဟာ နှလုံးသွင်းသူတို့အား အထူးသဖြင့် အကျိုးများစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် “သုဘုတိ” ဆိုတဲ့ ရဟန္တာမထေရ်ဟာ ဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းရှေ့၌ ခေတ္တရပ်နေစဉ်အတွင်း မေတ္တာဈာန်ကို ဝင်စားတော်မူပါတယ်။ မနောမယ
By မနောမယ / November 17, 2018
သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာလေးအကြောင်း မသိသူတွေအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ်ပြောချင်ပါတယ် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်က ၂၇ခေါက်ကျော်ရင် အိမ်စောင့်နတ်၊ ကိုယ်စောင့်နတ်တောင် နေမရတော့ပါဘူး။ ပြိတ္တာကတော့ ဂါထာအစကြားတာနဲ့ တစ်ချိုးတည်းလစ်ပြေးပါတယ်။ မနောမယ
ဒီနှစ်ဝါတွင်း သုံးလမှာ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်ပြီး ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းနှင့်တကွ မနောမယပရိသတ်အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ရေ … ဝါတွင်း (၃)လ ရက်ပေါင်း(၉၀)စိပ်ရတဲ့ အဓိဌာန် ပုတီးစိပ်နည်းလေးပါ။ ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှ တော်သလင်းလပြည့်နေ့ထိ
By မနောမယ / July 12, 2018
ကျွန်မက ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ စား သောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ်။ ကျောင်းကကြီးတော့ ဆိုင်ပေါင်း (၅၀)ကျော်လောက် ရှိပါတယ်။ ဈေးသည်တို့ရဲ့ သဘာဝအတိုင်း ရောင်းကောင်းတဲ့အခါကောင်း၊ မကောင်းတဲ့အခါလည်း မကောင်းပေါ့ဘူးနော် …။
By မနောမယ / May 15, 2018
(၁) ထွက်လေဝင်လေလေးကို ရှုနေတာက ကာယာနုပဿနာ။ (၂) ဝမ်းနည်းတယ် ဝမ်းသာတယ် ချမ်းသာတယ် ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးကို ရှုနေတာက ဝေဒနာနုပဿနာ။ မနောမယ